China BRC welded Mesh ngere maka Architectural ngere Manufacturer na Supplier | Oghere
A na-echepụta ogige BRC site na ịgbatị usoro triangular ahụ n'elu na ala ya na-adabere na ngere mkpuchi waya. Ọ bụ ngere ígwè site na iji eriri nchara nchara buru ibu nke ejikọtara ọnụ iji guzogide egwu ndị dị na mpụga. Ọdịdị dị n'elu na ala na-eme ka ọ dị mma iji dọta uche. Na elu erughị ala ígwè waya na kpọmkwem ntupu Ọdịdị na-enye elu nchekwa fencing usoro maka ụlọ. PRO.FENCE ọkọnọ BRC welded waya ntupu ngere dị iche iche na agba. Ọzọkwa 2 dị iche iche elu ọgwụgwọ nke kpaliri na ntụ ntụ ntekwasa. Anyị na-azụ ọkwa waya carbon nchara na ama ama ntụ ntụ nke Akzon Nobel, na iji akụrụngwa dị elu iji hazie.
A na-ejikarị ogige ntanye BRC weld dị ka ogige eji achọ mma maka ogige, ogige ntụrụndụ, na zoo, ma ọ bụ dị ka ogige nchebe na ebe a na-adọba ụgbọala, ọdụ ụgbọ elu, ọdọ mmiri, obodo na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ nkwụsị na-adịgide adịgide ma dị mma.
Ntupu: 50 × 150mm / 75 × 150mm / 50 × 100mm
Ogwe ogwe: H1200 / 1500/1800 / 2000mm × W2000mm / 2500mm
Biputere: Gburugburu post, Post post
Ntọala: Mgbapụta ihe, ikpo ala
Fittings: SUS304 / kpaliri
Emechara: A na-ekpuchi galvanized / ntụ ntụ (Brown, Black, Green, White, Gray)
1) The ntupu panel na kpaliri apụ na mgbe ahụ electrostatic ịgba n'elu. Yabụ BRC nsu nwere ezigbo nguzogide corrosion.
2) Mpịakọta elu na-enye ya nkọ ma ọ bụ akụkụ siri ike iji zere mmebi nke eriri waya nye ndị mmadụ.
3) specialdị pụrụ iche dị n’elu na ala na-eme ka ọ dị mma n’anya na uwe ga-achọ ogige gị mma. O nwekwara ezigbo visibiliti iji gosi ndị mmadụ ogige gị n’èzí.
4) Nhazi dị mfe adịghị mkpa itinye oge dị ukwuu na ntinye na ndozi.
Nkebi NO.: PRO-11 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Nke gara aga: Chain Link ngere N'ihi azụmahịa na obibi ngwa
Osote: Perforated metal nsu panel maka ụkpụrụ ụlọ ngwa